[Atụmatụ] Imeziwanye LXDE | Site na Linux
[Atụmatụ] Imeziwanye LXDE
AurosZx | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ebe ọ bụ na a na-eche akụkụ dị mma nke isiokwu blog Xfce, KDE, na otu na ibe nkatọ oge ụfọdụ nke Gnome, M chọrọ inye ya ebe Lxde. Anyị maara nke ahụ na ndabara Lxde ọ bụghị dị ka zuru ezu dị ka, ọmụmaatụ, Xfce. Oge ụfọdụ ị nwedịrị ike ịga n'akụkụ ọzọ tebụl ndị ọzọ ka ị hapụ ya nke ọma. Taa, ewetara m gị ọtụtụ ndụmọdụ ga - enyere gị aka inwe a Lxde nwekwuo ike 😉
Tupu anyị amalite, Echere m na ị nwere ma ọ dịkarịa ala distro njikere (ma ọ bụrụ na ha ga-amalite na ọkọ ...). Nke ahụ bụ, ha enweelarị Xorg, a onye njikwa oge (ọ bụrụ na ha ejiri ya) na Lxde arụnyere. N'ihi na Lxde A na-atụ aro ya LXDM dị ka onye njikwa oge, ọ bụ ezie na ọ masịrị m karịa LightDM.
Ọ bụrụ na ị wụnyebeghị distro, ma ọ bụ desktọọpụ, ọ ga-adịrị mma ịhapụ ụfọdụ ebe a:
Archlinux: ntọala ntọala (Ndokwa) (Gespadas), LXDE nwụnye (Ndokwa) (Nweta)
Debian: ntọala ntọala (Taringa), LXDE nwụnye (Wiki).
Ndị ahụ bụ Ihe atụ abụọ na m nwere ike inye. Anaghị m edegharị ha n’aka n’ihi na ha adịlarị, naanị ị ga-ejikọ ha. N'okwu m, emere m ya Archlinux, na ejiri m nduzi 4 ahụ, na-atụnyere ha ma na-agbakwunye na otu ihe na-efu na ibe. Ana m akwado ya.
Achọpụtakwara m na Elav emeela a mini ndu tupu, aga m etinye ụfọdụ ihe ebe a ebe ọ bụ na ị ga-enye ya ụfọdụ merit 😉
Ọ dị mma. Ka anyị bido.
1 LXMED, nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ maka LXDE
2 Kzọ mkpirisi Desktọpụ
3 Dezie ụzọ mkpirisi keyboard LXDE
4 Tinye uzo mkpirisi di nkpa na menu LXDE
5 Dochie LXPanel na LXPanelX
6 Dochie PCManFM na SpaceFM
7 Hazie Openbox site na LXAppearance
8 Ntụziaka akwadoro na LXDE
LXMED, nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ maka LXDE
Weghara LXMED na mkpochapụ.
Ihe mbu mbu. A ga-achọ nke a maka ụfọdụ akụkụ nkuzi a. LXMenu Onye ndezi Emere ya na ebumnuche nke inye Lxde un Nchịkọta nhọrọ dị mfe, ma dị irè. N'ezie, Ọbụghị naanị Ọ na-arụ ọrụ na Lxde, kwa M na-anwale ya nke oma Xfce 🙂
Naanị ihe chọrọ LXMED na-arụ ọrụ bụ Java (OpenJDK / Oracle ihe ọ bụla na-arụ ọrụ) na, dabere na distro, gksu / beesu / wdg ...
Anyị na-ebudata ya ebe a. Mgbe ahụ, anyị na-emeghe ya, anyị abanye na folda ahụ, na njedebe anyị na-eme:
Ma ọ ga-arụnyere. Anyị ga-ahụ ya na menu Lxde n'okpuru udi «preferences«, Ọ bụ ezie na curiously a ga-enwe Aha na bekee. Hà na-eche otu ihe ahụ ka m? Anyị ga-edozi ntinye menu, nke nchịkọta akụkọ nchịkọta akụkọ, yana nchịkọta nchịkọta nhọrọ n'onwe ya: Mbido menu 😛
Anyị na-emeghe LXMED ọ ga-ajụkwa anyị maka paswọọdụ mgbọrọgwụ. Anyị na-ewebata ya, pịa «anabata"na njikere. Ka anyị gaa na udi otuMmasị»Ma pịa«Nchịkọta nhọrọ", Mgbe ahụ na"Dezie«. Na aha, tinyezie ihe ị chọrọ. Edere m "Dezie menu nhọrọ".
Kzọ mkpirisi Desktọpụ
Debe desktọpụ dị ọcha ebe enwere ekele maka ụzọ mkpirisi.
Onye jirila tebụl ndị ọzọ dịka Xfce, ị nwere ike ịchọpụta na site na mbido enwere mmadụ ole na ole Ụzọ mkpirisi maka Nchekwa onwe, Akwụkwọ mpempe akwụkwọ, Wdg
Lxde Ana m eweta otu maka Nchekwa onwe, a kpọrọ ya Akwụkwọ m (Windows Achọpụtara? xD), Ma ọ gafeela. Yabụ, anyị ga-gbanwee ụfọdụ ndị na-ebupụta ihe iji nweta ihe yiri ya.
Anyị na-emeghe menu nke Lxde, na anyị na-achọ maka Njikwa faili »Right Pịa» Tinye na Desktọpụ. Na mkpokọta, anyị ga-eme nke ahụ ihe dịka oge 3. Ihe ndị a bụ imeghe onye ọ bụla n’ime ha na onye ndezi ederede wee gbanwee akụkụ ndị egosiri n’okpuru:
Maka akara ngosi kọmputa:
N'ihi na Personal nchekwa akara ngosi:
N'ihi na ahịhịa nwere ike akara ngosi:
Na nke anyị kwesịrị ịnweworị akara ngosi atọ dị na desktọọpụ 🙂 Na otu usoro ndị ahụ ị nwere ike ịmepụta ụzọ mkpirisi ndị ọzọ.
Dezie ụzọ mkpirisi keyboard LXDE
Wepu Obkey edezi ụzọ mkpirisi.
Lxde ọ naghị abịa na ndabara na ngwaọrụ dị ka nke a. Ma ebe ọ bụ na LXDE jiri Openbox, anyị nwere ike iji Obkey Iji wụnye ya na Debian ọ ga - abụ:
Site na ndabara Obkey mepee faịlụ ahụ Openbox ihe dị ~ / config / openbox / rc.xml. Ma, ọ bụrụ na anyị wepụta ya n'ụzọ a:
Ya mere ọ bụrụ na ị mepee faịlụ ahụ Lxde. Ugbu a, ka anyị kwuo na anyị chọrọ ịpị igodo ahụ [Bipute] gbaa ọsọ okpokoro iji nweta nseta ihuenyo ... Anyị na-eme iwu gara aga, pịa na abụọ akara ngosi mmanya (nke ịgbakwunye). Na ngalaba omume, anyị họrọ «Igbu«, Ma n’elu, ebe ọ na-ekwu«iwu»Anyị na-ede, dịka ọmụmaatụ:
Agaghị m ekwu na «ọrụ»Aha njirimara gị ka ọ bụ ee? Nke ahụ ga - emepụta nseta ihuenyo na oge na ụbọchị, yana M ga-edebe ya na folda "Afia"si na gị Mbido. N'ikpeazụ, pịa ụzọ mkpirisi keyboard nke ndepụta ahụ, wee pịa igodo ahụ [Bipute]. Anyị na-azọpụta, na voila! Keyboardzọ mkpirisi igodo ọhụrụ.
Tinye uzo mkpirisi di nkpa na menu LXDE
Weghara ebe ị hụrụ ụzọ mkpirisi na menu LXDE.
Ebe m maara nke ahụ LXMED ka m gbanwee menu, M gbara ọsọ ike ụfọdụ mkpirisi gbanwee nkịtị LXDE nhọrọ Ozugbo.
Onye na-ekwu «Mbido LXDE»Ọ bụ ụzọ mkpirisi iji gbanwee ngwa ma ọ bụ usoro nke amalitere na Lxde.
«LightDM GTK ekele»Bụ gbanwee GTK ọdịdị nke LightDM.
Emekwara m otu na ngwa ngwa, akpọ «Njikwa faili (mgbọrọgwụ)"Nke ahụ mepere PCManFM dị ka mgbọrọgwụ.
N’atughi anya, odikwa nke na emepe Obkey n’etu aka na faili LXDE 🙂 A na akpo ya «Dezie ụzọ mkpirisi keyboard LXDE".
Dochie LXPanel na LXPanelX
Ee, LXPanelX na-egosi windo preview 😀
Eziokwu, na panel Lxde ọ na-efu ụfọdụ atụmatụ nke ga - eme ka ọ nwekwuo ike ịhazi / bara uru, yabụ… gịnị kpatara na anyị anaghị agbanwe ya? Oge ụfọdụ gara aga a LXDE panel ndụdụakpọ LXPanelX. Ma eleghị anya, ọ dị ntakịrị ntakịrị karịa LXPanel Omenala, ma ọ bụrụ na ha dị njikere imefu ntakịrị RAM egbula oge ịnwale ya 🙂
Nke mbu, anyi aghaghi igbanwe faịlụ Mbido LXDE. Ya mere dị ka mgbọrọgwụ, iji ọkacha mmasị anyị nchịkọta akụkọ, anyị ga-emeghe ya. Ọmụmaatụ:
N'ime ya, anyị ga-ahụ ahịrị nke kwuru, sị:
Anyị ga-agbanwe ya dịka nke a:
Na njikere. Ugbu a, itinye mgbanwe ahụ ozugbo, ma malite ịhazi LXPanelX na oge ezumike gị, mepee ọnụ, ma mee:
Nke ahụ ga-ezu. Ma ọ bụ naanị ịmalitegharịa PC xD
Enwerekwa nkọwa ụfọdụ. The launcher nke LXPanelX ọ gaghị emeghe mgbe ị pịrị [Alt] + [F2], n'ihi na ọ na-abịa na ndabara iji mepee de LXPanel (ee, iwu a di iche). Ya mere na Obkey, Anyị ga-emeghe faịlụ Lxde na anyị ga-achọ akụkụ ebe thezọ mkpirisi nke [Alt] + [F2], anyị ga-edozi iwu gị. Anyị ga-ahapụ ya dị ka nke a:
Ugbu a ngwa ngwa ga-emeghe.
Dochie PCManFM na SpaceFM
Nweta site na SpaceFM.
E nweelarị okwu banyere ya Oghere ebe aỌ bụ PCManFM ndụdụ, a na-akpọ PCManFM-Mod, na ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na ihe ọ bụla na-erughị a PCManFM na ọbụna ndị ọzọ ọrụ, na ihe fọrọ nke nta otu oriri. Onwe m, m ka na-eji PCManFM, Achọghị m ọtụtụ nhọrọ. Ma ọ bụrụ na ị chọrọ jiri ndabara site na iji SpaceFM, M na-akụziri ha.
Anyị ga-edezi faịlụ ahụ Mbido LXDE. E nwere akara nke na-aga dị ka nke a:
Anyị ga-agbanwe ya ka ọ dị ka nke a:
Na nke ahụ SpaceFM ga-ejikwa desktọọpụ ahụ kama PCManFM. Na nke a, ha abụọ yitere, yabụ na anaghị m eji ya 😛 Agbanyeghị na mkpụrụedemede mara mma karịa na SpaceFM m ga-ekwu. Ugbu a, maka mgbanwe ahụ ozugbo, anyị na-eme ihe na launcher Lxde:
Na na ọ ga-adị njikere 🙂
Hazie Openbox site na LXAppearance
Ndi an-kpọ Ọdịdị ọ na-elekọta naanị isiokwu ahụ GTK, Akara ngosi, fuente y cursor. Mana anyi nwere ike ichekwa onwe anyi imeghe ObConf, na-etinye ngwugwu ọdịdị-obconf, nke kwesiri idi na otutu nkesa (ma oburu na obughi).
Ntụziaka akwadoro na LXDE
Iji mechaa, ana m ahapụrụ gị obere ndepụta nke ọgba aghara nke m gbalịrị na LXDE yana m chere na ọ bara uru.
Trisquel Obere. Dabere na Ubuntu. Naanị ya nwere ngwugwu n'efu, yana LXDE dị ka Lubuntu mana ọ dị mfe. Nyocha Maxwell, dị Trisquel 5.5 STS Brigantia, akwukwọ ọrụ.
PCLinuxOS LXDE (Obere, gini bu iso nke dara ala). Omenala LXDE mara mma, agbanyeghị na enwetara m ya. Ọ na-abịa na ọtụtụ ndị ọkwọ ụgbọala na ndabara. Ọ na-eji nchịkọta RPM, mana ejikwa APT ha. Pandev92 nyocha, akwukwọ ọrụ.
Marathon ROSA Linux 2012 LXDE. LXDE dị mfe, nke ọkara na nke zuru oke, yana mara mma. Ọ bụ LTS, ọ bụkwa ndụdụ nke Mandriva. Wepu ROSA Linux Marathon 2012, akwukwọ ọrụ (Ibe LXDE peeji nke obodo).
Lubuntu. Ihe omuma Ubuntu nke emere (nke Canonical nakweere dika nke 12.04 LTS) na LXDE. Na-atụ aro, obere oriri (ihe dịka 80MB), ezigbo ihe osise, na ngwa ọkụ na ndị ọzọ. Nnọọ weebụsaịtị.
Fedora Spin LXDE. Nke a bụ ihe ọzọ m nwere ike ikwu. Fechaa, yana ezigbo njikwa njikwa ngwugwu, ụdị ndozi LXDE (mana enwere ike ịhazi ya). Spin LXDE peeji nke gọọmentị.
Ihe ndị ahụ dị OOTF (Si na igbe, ma ọ bụ njikere iji). Enwekwara nhọrọ ndi ozo, dika Debian, Arch, Gentoo, Magaji 2, SlackwareKedu nke dị ntakịrị, ma dịkwuo mma maka ụfọdụ. N'ime ndị m ga-anọ karịa na Debian na Arch 😉
Ma nke ọma, nke ahụ bụ onye ndu m na LXDE. Know mara, ntuziaka a nwere ike ịga n'ihu na-eto eto… Oh, echiche! Ọ bụrụ na ha nwere aghụghọ maka LXDE, hapụ ha na nkọwa, m ga-eji obi ụtọ tinye ha na ndu. Cheers! 😀
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » [Atụmatụ] Imeziwanye LXDE
Ihe 36 kwuru, hapụ nke gị
Eziokwu na-atọ ụtọ ma Lxpanelx ego ole ncheta ga - emefu 10 50 ma ọ bụ 200 mb karịa?
Eziokwu bụ na ọ dị oke ọnụ mana ị ga-ahụ oke ma ọ bụ obere ebulu ebili ma ọ bụrụ na ha sitere na 10 ruo 50 megabytes ọ ga-abụ okomoko.
Kwesighi ịbụ onye na-emebiga ihe ókè, gbasara 25 MB nke RAM karịa ma ọ bụ obere, dịka m na-echeta ...
Nke ahụ bụ nnukwu ederede na isiokwu akara ngosi bụ ma ọ bụ dị ka linuxmint ọkachasị n’elu ogwe.
Daalụ nke ukwuu AurosZx, na nke a nwere ike ịgba m ume ka m wụnye arch + lxde 😛
Daalụ maka ndụmọdụ ndị a magburu onwe ya iji melite LXDE na m ga-anwale ha
Ekwesịrị m ịgụgharị isiokwu ahụ. desktọọpụ anya ikpọ. Ọbụna echere m na ọ bụ KDE! 🙂
Hehe, bụ na LXPanelX na-arụ ọrụ ebube… Daalụ 😉
n'eziokwu m ga-ekwu n'eziokwu, ọ bụ desktọọpụ LXDE pụrụ iche m hụtụrụla! Amaghị m na m nwere ohere ndị ahụ.
ma ọ bụrụ na ọ bụ nnọọ customizable, naanị a zuru ụwa ọnụ menu na-efu efu
Ọzọ distro na m hụrụ n'anya bụ Linux Mint (Echere m na ọ bụ 11) na LXDE. Ọ bụ ihe dị egwu, ahọrọ m ya na Lubuntu n'ihi na nke ikpeazụ ahụ hapụrụ ụfọdụ oghere ndị na-esote elekere ...
Amaghị m LxpanelX ọ na-adị okomoko !!
Ekele na ekele na edemede!
nke ahụ bụ ezigbo mbipụta ikpeazụ nke mint, nke 11 nwere LXDE, 13 (maya) adịghị njọ ma ọlị
Hmm, Mint LXDE… Agbalịbeghị m, enwere ike m.
Daalụ, na ndụmọdụ ndị a niile ọ bara uru itinye LXDE
Ndụmọdụ dị oke mma, kpọọ gị ka ị gbalịa LXDE, ọ bụ na net ka ekwuputara na netwọkụ a. Daalụ maka ntinye.
Amaara m, ọbụlagodi ebe a ekwughi ọtụtụ ihe 😉 Amaara m na m ga-eduzi ndị a ee ma ọ bụ ee
Ihu desktọọpụ gị dị mma.
Daalụ 😉 Fedora LXDE bụ ihe ọzọ dị mma, echefuru m itinye ya ...
Amaghi banyere lxappearance-obconf. O rere ure imeghe ha abua. Ezigbo mma n'ọnụ!
Zaghachi to croto
Ezigbo nduzi, anọ m na Lubuntu ruo nwa oge, mana enwebeghị m ahụ iru ala na mpụga XFCE.
Dị ka data, ekwenyere m na Lubuntu bụbu ihe nkwekọrịta gọọmentị.
dares daza dijo
Anọ m na-achọ ezigbo lxde distro… M ugbu a nwere Fedora 17 atụ ogho lxde na m nwere ike ikwu na ọ…. mana i mere ka m juo anya banyere nkesa lx nke Rosa ... ị nwere ike ịnye m nkọwa ndị ọzọ gbasara ya?
Zaghachi andres daza
Ọfọn, m nwalere ya nwa oge, mana m nwere ike ikwu nke a: ọ nwere ọmarịcha ọdịdị (na ihuenyo ụlọ dịkwa oke), oriri ya adịghị elu (ihe dị ka 100MB echere m), onye njikwa ngwugwu ihe osise dị mfe iji (A na-akpọ ya RPM Drake, ee ee, ROSA na-eji nchịkọta RPM n'ihi na ọ dabere na Madriva), ọ na-abịa na ọtụtụ codecs (nke ọma, ọ na-abịa na Deadbeef na VLC nwere ụfọdụ kodeks: D). Nke ahụ bụ ihe m chọpụtara na mbụ m lere. A ga m asị gị sọọsọ ịwụnye Compton iji mee ka ọ zuo oke, n'ihi na ọ bịalarị LXPanelX 🙂
Guillo Quintero kwuru dijo
Oge ụfọdụ m na-anwale lxde, enwere ike iji ya mee ihe na enweghị nsogbu, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị gbakwunye ya na nkuzi ahụ. I nwekwara ike iji otu-2d panel, ọ bụrụ na ị masịrị menu ụwa niile 😛
Zaghachi Guillo Quintero
Guillo kedu ka ị si mee ya? Kedu maka ịwụnye menu ụwa na lxde? Ọ bụ naanị ịwụnye ngwugwu ịdị n'otu-2d-panel, ka ị ga-eme ihe ọzọ?
Obi dị m ụtọ maka mbipụta nke isiokwu a, n'ihi na ọ na-enyere gburugburu desktọọpụ kachasị amasị m, LXDE, ịnwekwu ọnụnọ, ebe o doro anya na ọ nwere ike ịhazi ya nke ọma na ọ nweghị ihe ọ ga-ekwo na desktọọpụ ndị ọzọ. Kedu ihe ọzọ, ndị ọzọ nwere ike inwe anyaụfụ LXDE ihe ọ na-enweghị onye ọzọ nwere (ikekwe E17): oke ọkụ.
PS: 'obkey' adịghị na nchekwa Debian.
Ezigbo nkuzi na ihe niile akọwapụtara nke ọma, ekele. Mana enwere m ajụjụ, kedu ka m ga - esi wụnye lxpanelx?, Ebe ọ bụ na na njikọ ị na - enye bụ naanị ebe nchekwa ọrụ. Ọ bụrụ na ọ gbanwee ma ọlị, ana m eji Lubuntu.
Zaghachi ka midd3r
Ahụrụ m na achọtara .deb maka Lubuntu, nke na-aga nke ọma na Debian na ihe ndị yiri ya. Nwere ike ibudata ya na repo a https://launchpad.net/~daniel-go-mon/+archive/maloy-lubuntu
Ebe ọ bụ na post a enweghị echiche nke Obi ike, enwere m mmasị ịgụ ihe o kwuru na ọ na-emegide ndị ọzọ mgbe niile. Echere m na achọrọ Spaniard, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na m gaa Spain ma chọta ya n'ụlọ ọgwụ ka mma, m ga-agbapụ na ya gaa ọzọ.
Ọ dị ezigbo mma, emere m mmemme dị ala: p maka akara ngosi, na Java, agbanyeghị na echetara m na enwere onye editọ nke na-anaghị agbakwunye ya na LXDE na mmemme mmemme: p
Zaghachi Arturo Molina
Daalụ maka ndụmọdụ! Na Mọnde m zubere ịnwale ya na debian. Maka njikwa nke netwọk Wi-Fi, kedu ihe ị kwadoro? Njikwa netwọk, wi-cd, ma ọ bụ ihe dị iche?
Agbalịrị m abụọ ahụ, enwere m mmasị na NetworkManager nke ọma, n'ezie, na ihu ihu ọma. Enwere m mmetụta zuru ezu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eji waya na ikuku na netwọk, i nwere ike iji Wicd na ọ bụ ya 🙂
Haha Adịghị m ka gị ...
Ma ugbu a olee otu m ga-esi wepu LXMED?
Ọ ga-amasị m itinye Ebe Mbepu menu n'ime NchNhr. Mmadụ ọ nwere ike ịgwa m ma ọ nwere ike?
Achọrọ m ịwụnye Globalmenu ebe m nwere ike ịmalite. Tutorialfọdụ nkuzi.
William Prado kwuru dijo
Kedụ ka m ga-esi nwee tebụl dịka nke gị? Nakwa na ihe oyiyi.
Zaghachi William Prado
Daalụ, nwa nwoke!
Ihe nzuzu dị ka itinye pcmanfm tupu ịbanye adreesị nke folda edoziwo ezigbo isi ọwụwa m nwere. Naanị m tinye LXDE na Ubuntu m iji mee ka ọ ka mma maka m na ọ bụghị n'ụzọ ọ bụla ị nweta m ebe ọ bụla. Naanị ihe m chọtara bụ usoro nzukọ a hapụrụ ọtụtụ iri afọ gara aga site na iji nweta azịza ma ọ bụ iyi egwu nke nsogbu ndị ahụ abaghị m uru.
Na nke a, enwere m ike ịmechaa desktọọpụ m desktọọpụ na-atọ m ụtọ. Eziokwu bụ na m na-achọ LXDE.
Fritzing: free electronic design tool
Otu esi edozi ngwa ngwa Linux ngwa ngwa